Semalt विशेषज्ञ: एपीआई वा एक वेबसाइट बाट डाटा Scrape को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका
एउटा अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस वा एपिआइले तपाईको सफ्टवेयर र उपकरणहरू एक अर्कासँग कुराकानी गर्न सक्षम गर्दछ। हामी द्रुत गतिको संसारमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ सबै चीज द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदैछ, र हामी आफ्नो समय र उर्जा बचाउन चाहन्छौं। सामान्य डाटा निकासी उपकरणले धेरै समय उपभोग गर्न सक्छ र हामीलाई अनलाइन व्यवसायहरू चलाउन गाह्रो बनाउँदछ, तर एपीआई सबै सामाजिक प्लेटफर्मको पछाडि ड्राइभि driving्गको रूपमा काम गर्दछ। यसले वेबसाइटबाट उपयोगी डाटा निकाल्न मात्र सहयोग पुर्‍याउँदैन तर झिकिएको डाटा सम्पादन गर्दछ र यसलाई पढ्नयोग्य र प्रयोगकर्ताहरूका लागि स्केलेबल बनाउँदछ। त्यसोभए, यो सुरक्षित छ कि एपीआईहरू प्रोग्रामरहरू र कोडरहरूको लागि उनीहरूको अनुप्रयोगहरूसँग कुराकानी गर्न राम्रो तरिका हो।
एपीआई प्राविधिक पृष्ठहरु संग सम्झौता:
विज्ञहरू एपिआइ डाटा वैज्ञानिकहरूद्वारा लेखिएको सटीक कोड हो भन्ने विश्वास गर्दछ जुन हाम्रो लागि वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्याबाट डाटा निकाल्न सजिलो बनाउँदछ। यसले टेक्निकल पृष्ठहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दछ र उनीहरूको जानकारीलाई स्क्र्याप गर्दछ। उदाहरण को लागी, फेसबुक ग्राफ एपीआईहरु लाई फेसबुक पेजहरु, समुदायहरु र अन्य समान नेटवर्कहरुबाट डाटा प्राप्त गर्न र स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एपीआई - सब भन्दा सजिलो डाटा स्क्र्यापिंग तरीका
प्रत्येक चोटि जब हामी एक विशिष्ट वेबसाइट को डेटा पहुँच गर्न चाहन्छौं हामी एपीआई को उपयोग गर्न को लागी छ। अन्य सामान्य डाटा निकाल्ने कार्यक्रम र प्रविधिहरूको विपरीत, एक एपीआई तुरून्त आफ्नो कार्य गर्दछ र तपाईंको डाटा १२० भन्दा बढी भाषाहरूमा स्क्र्याप गर्न सक्दछ। त्यसोभए तपाईले चिनियाँ वेबसाईटबाट जानकारी स्क्र्याप गर्नु हो वा जापानीज ब्ल्गबाट सूचना निकाल्न चाहानुहुन्छ, एपीआई ले तपाईको निर्देशन अनुसार तत्काल यसलाई निकाल्ने वा स्क्र्याप गर्ने छ।
किन एपिआइ व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण छ?
यदि तपाईंसँग वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्या छ र ती सबैबाट एक वा दुई घण्टा भित्र डाटा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने एपीआई त्यो गर्न उत्तम तरिका हो। सही डेटा तान्नका लागि तपाईंले भर्खर API खोल्नु पर्छ। यसले निम्न तीन तरीकाले व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउँछ:
१. व्यवसायहरूले एपीआईको साथ अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्
एक व्यवसायले एपीआईको साथ क्वालिटीमा सम्झौता नगरी बिभिन्न अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्दछ। केही अनलाइन कम्पनीहरूले उपकरणहरू र सफ्टवेयर बेच्छन् र उनीहरूको व्यापार प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न मद्दतको लागि खुला API हरूबाट सूचना तान्न भर पर्दछन्। वास्तवमा, एक एपीआई बिना, एक व्यापार बढ्न सक्दैन र यसको ग्राहकहरु को लागी उपयोगी अनुप्रयोगहरु बनाउन सक्दैन।
व्यवसायका लागि एपीआई महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले प्रोग्रामरहरूलाई अद्भुत वेब स्क्र्यापिping उपकरणहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यी उपकरणहरूले हामीलाई हाम्रो कार्यहरू अझ राम्रोसँग गर्न मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, कुञ्जीशब्द आधारित API हरूले हाम्रो वेबसाइटहरूको लागि खोजशब्द र वाक्यांशहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदछ। डाटा स्क्र्याप गर्दा, एपीआईहरूले हाम्रो लक्षित कुञ्जी शब्दहरूको ख्याल राख्छन् र आउटपुटमा परिवर्तन वा परिवर्तन गर्दैन।
API. एपीआईहरू विकासकर्ता र प्रोग्रामरहरूको लागि राम्रो हो
दुबै विकासकर्ता र प्रोग्रामरहरू एपीआईबाट फाइदा लिन सक्छन् र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई उत्तम सम्भावित अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, Reddit एक मोबाइल अनुप्रयोग को रूप मा शुरू गरीएको थियो र आफैलाई मोनेटाइज गर्न को लागी धेरै उपकरण र डाटा निकाल्ने सेवाहरु मा निर्भर थियो। अब Reddit वेब यातायात को एक उत्तम स्रोत हो। एक एपीआई को उपयोग गरेर, तपाईं रेडडिट-जस्तै फोरमहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र केही दिनमै बढी र अधिक व्यक्तिहरूलाई संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ।